emoyeni ezicindezelwe - emoyeni mass eziqukethwe isiphi isitsha, nge umfutho ngenhla ozungeze umhlaba wethu. It is lisetshenziswe umkhakha ezihlukahlukene yokukhiqiza imisebenzi. Ukudla okuvamile onomfutho emoyeni ohlelweni - iyunithi ezisebenza endaweni ingcindezi afika ku bar eziyishumi. Ezimweni ezinjalo, i-mass umoya onomfutho kayishumi umthamo yayo yasekuqaleni.
At ingcindezi bar onomfutho emoyeni eziyisikhombisa kuyinto cishe ephephile ukusebenza. Uyakwazi ukunikeza anele ukushayela force ithuluzi akuyona okubi kakhulu ukwedlula ukunikezela ngogesi. Lokhu kudinga ayimbijana izindleko. Ngaphezu kwalokho, isimiso esinjalo elinesimo ukusabela okusheshayo ukuthi umphumela kungenza kube zibelula. Nokho, kuzonisiza bona acabangele nemingcele ezibalwe ngezansi.
The eside endleleni-umthengi compressor, amandla ngaphezulu okunikezwa.
umoya onomfutho siyasebenza ngempela lapho stock enkulu imisebenzi efanayo, lapho kwenzeka kuba khona inzuzo phezu ukufaka kagesi. Ngemva ngempumelelo ukufaka uMbhalo emoyeni kuka motor.
Kuyadingeka ukuba ngokuqhubekayo nokuqapha ukuvuza.
Uma usebenzisa amanzi, ukupheka igesi, nokunye. D. Sesike ngakujwayela ukuba ukonga, kodwa ukusetshenziswa lolu hlobo amandla, abaningi nokumosha, ucabangela khulula yayo. Kuyadingeka njalo zenze ngcono isimiso sokuthutha womoya ekukhiqizeni, isibonelo, eNtshonalanga Yurophu zikhona njalo entsha nentuthuko Imibhobho esemzimbeni lapho komoya lincane kakhulu, nge amazinga omsindo kakhulu ziyancipha.
Isicelo umoya onomfutho
Kaningi, izimboni usebenzise lolu hlobo yamandla ezikhungweni zokuphehla yokuhlanza ephumelelayo fast and imishini kusuka ukungcola nothuli. Ngaphezu kwalokho, umoya onomfutho kabanzi ngoba uthule amashubhu kubhayela. Ngo embonini Woodworking isetshenziswa ukuze bahlanze kwezakhiwo, imishini ngisho izingubo ngokhuni uthuli. Amazwe amaningi aye ebeseke wavela ku ukusetshenziswa kwamazinga kwalolu hlobo amandla, isibonelo, e-Europe ke CUVA, futhi e-US - Osha. Ngaphezu kwalo yokukhiqiza imisebenzi, zingamathuluzi ezivamile ezisebenza ngqo Yiqiniso emoyeni, - kuyinto isikudilayiva, sokuzivivinya womoya, amabhowudu, izando (ngoba ukufakwa imishini kanye nezokwakha), izifutho (ngesikhathi overhauls). Ngaphezu kwalokho, manje kabanzi onomfutho emoyeni amathini e airguns.
Ukusebenzisa emoyeni onomfutho, bagcine siphephe ezibalwe ngezansi.
Musa aim jet emlonyeni, amehlo, ikhala, izindlebe kanye nezinye izindawo.
Awukwazi ukuphatha ecindezeleke amanxeba evulekile, t. Ukuze. Ngaphansi kwesikhumba bangase bafinyelele abagcwele lapho befinyelela inhliziyo, lokho kuyoholela ngenxa yokuhlaselwa yinhliziyo, futhi uma ubuchopho, kwakungase avuse nenkinga yokopha ebuchosheni. Ngaphezu kwalokho, siya esilondeni, kungene umoya kuwo ukutheleleka esemgwaqweni uhlelo compressor noma amashubhu.
Akuvunyelwe ukuba izitike futhi uqondise onomfutho emoyeni jet ayesebheka abanye abantu.
akufanele ekhiphela up ingcindezi ohlelweni compressor okweqa kuyinsakavukela.
Zonke izici ukufakwa womoya kumele kuvikelwe ngokucophelela kuqhathaniswe ukulimala lamabutho futhi ngenxa yalokho.
It kungavunyelwe ukuhlanza kusuka izintuli nokungcola imishini ebukhoneni evulekile ilangabi omthombo Welding. Kungabangela ukuqhuma ngenxa yokubakhona uthuli okwesikhashana.
Ukusebenza onomfutho emoyeni izinhlelo kumele kusetshenziswe izinto zokuvikela, ezifana amagogolo noma buso.
Kungavunyelwe enze couplings yobunzima, amalunga omzimba threaded nezihluthulelo e ISIZINDA ingcindezi noma amapayipi.
Uma ufaka amapayipi amanzi womoya kumele kuvikelwe emhlabathini nge ingozi okungenani umonakalo (ophahleni, izindonga).
Izinzuzo emoyeni onomfutho
Manje ake sibone ukuthi yini izinzuzo usebenzisa lolu hlobo of energy zokukhiqiza imigqa.
amathuluzi womoya zinezikhathi isisindo ongaphakeme amandla phezulu ngokwanele.
izitshalo ezinjalo ingasetshenziswa isikhathi eside ngaphandle okweqile.
izindleko okuphansi abebeziphilisa ngako.
Air compressors ingasetshenziswa njengendlela umthombo energy production kusukela ingozi yomlilo izinto eziqhumayo noma oluvuthayo (imigudu, izimayini).
Lezi zinsimbi Site izitshalo nge high endaweni enobudlova. Nokho, kubalulekile ukuba sicabangele ukuthi ukusebenza onomfutho air lokushisa ingaphezu kwe-kuma lokushisa eziyishumi degrees Celsius. Ngaphezu kwalokho, saneliswe ngokuthela kwezindebe lokhu ipharamitha kuzokhulisa ngokulingana ngqo umswakama komoya.
Ukusetshenziswa izinhlelo womoya kungaluqinisa kakhulu lula ezishintshayo izinqubo zokukhiqiza. Ngokwesibonelo, ezifana omiswe, enamathela nabanye.
Ukuze usebenze ngokugcwele futhi ukufakwa high-ukusebenza kahle, kumele ihlangabezane nezidingo ezilandelayo. Uhlelo womoya kufanele ukunciphisa ukulahleka, ngaphezu kwalokho, emoyeni beze abathengi kanye omile futhi ahlanzekile, lokhu kufinyelelwa ngokufaka desiccant ekhethekile, okuvumela umswakama uphenduke. Futhi, ukunaka ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe amapayipi. ukufakwa Lungile air - kuyisihluthulelo ukusebenza ukuqina kanye nokunciphisa izindleko yesondlo. Ngokwandisa izinga ukugandeleleka compressor liyakwazi yokwehla kwezinga iphayiphi.
Ukubalwa onomfutho emoyeni ukusetshenziswa
Samandla amayunithi njalo zihlanganisa bona abamukelayo okuthiwa (emoyeni amathangi). Kuye ukusebenza ihadiwe namandla uhlelo ingase ihlanganise abamukelayo eziningi. Umsebenzi wawo oyinhloko - bushelelezi yokucindezelwa ukuguquguquka Ukwedlula phakathi kwesigubhu emoyeni selehlile mass gaseous futhi lokhu kuholela ekuphelelweni ukufingqa. onomfutho emoyeni kubalwa ukucacisa ukusetshenziswa owamukelayo. Lokhu kwenziwa kusetshenziswa le ndlela elandelayo:
V = (0.25 × Q c x p 1 T 0 x) / (f max x (P u -p l) x T l), lapho:
- V - ivolumu ethangini emoyeni;
- Q c - ukusebenza kohlelo compressor;
- p 1 - ingcindezi kwayo kuleyo ndawo yokuhweba;
- T l - lokushisa esiphezulu;
- T 0 - onomfutho air lokushisa e osamukelayo;
- (p u -p l) - umthwalo kusengaphambili futhi wehlise umehluko ingcindezi;
- f max - imvamisa esiphezulu.
Futhi konke ngaye, Vaseline Technical
Udweba kanjani Anna no-Elsa - ngaphandle izinhlamvu ukusuka "Cold Inhliziyo"